အက်စ် ငါးလုံး - ဝီကီပီးဒီးယား
အက်စ် ငါးလုံး နည်းလမ်း
အက်စ် ငါးလုံး (အင်္ဂလိပ်: 5S) ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းခွင် နေရာချသည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဂျပန်ဝေါဟာရများဖြစ်သည့် 整理 (Seiri)၊ 整頓 (Seiton)၊ 清掃 (Seiso)၊ 清潔 (Seiketsu)၊ 躾 (Shitsuke) တို့ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Sort, Set in Order, Shine, Standardize နှင့် Sustain ဟူ၍ ဘာသာပြန်အပြီးတွင် ရလာသည့်ဝေါဟာရများကို အတိုကောက်မှတ်သားခြင်း ဖြစ်သည်။  အက်စ် ငါးလုံး အား မျက်မြင် စီမံခြင်း (Visual Management) ဖြင့် တွဲဖက်အသုံးချလေ့ရှိသည်။
အချို့လုပ်ငန်းခွင်များတွင် လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေး (Safety) ကိုပါ ဆဌမမြောက် အက်စ် အနေဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည်။ 
၁.၁ စီခြင်း (Sort)
၁.၂ စဉ် ထားခြင်း (Set in Order)
၁.၃ ရှင်းခြင်း (Shine)
၁.၄ စံထားခြင်း (Standardize)
၁.၅ အစဉ်တစိုက်လုပ်ခြင်း (Sustain)
အချိန်ကိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်း (JIT Manufacturing) လုပ်ရာတွင် သုံးသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။  အိုဆာဒါ (Osada) ဖန်တီးသည့်နည်းနှင့် ဟီရာနို (Hirano) ဖန်တီးသည့်နည်းဟူ၍ နှစ်မျိုး ရှိသည်။   ဟီရာနို ဖန်တီးသည့်နည်းမှာ ပိုအစီအစဉ်ကျသည့်အတွက် တိုယိုတာမှ ယူငင်အသုံးချခဲ့သည်။  မူလနည်းတွင် Seito နှင့် Seiso မှာ တပေါင်းတည်း ဖြစ်သည်။
ပစ္စည်းအားလုံးအား စီစီရီရီထားကာ မလိုသည်ကို ဖယ်ရှားထားခြင်း ဖြစ်သည်။ လိုသည့်ပစ္စည်းအား ရှာဖွေရချိန် လျော့နည်းစေပြီး စစ်ဆေးရန်လည်း လွယ်ကူသွားစေသည်။ မလိုသည်များကို ဖယ်ထားသည့်အတွက် နေရာလွတ်များလည်း ရှိလာသည်။ ပစ္စည်းနည်းသည့်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံမှု ပိုရှိလာသည်။
စဉ် ထားခြင်း (Set in Order)[ပြင်ဆင်ရန်]
ကြမ်းခင်းမှတ် ထားကာ နေရာချထားပုံ
အက်စ် ငါးလုံး နည်းအတိုင်း ထည့်ထားသည့် ကိရိယာထည့်အံဆွဲ
လုပ်ငန်းမြန်ဆန်စေရန် လိုသည့်ပစ္စည်းအားလုံးကို အသင့်တော်ဆုံးနေရာတွင် ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုံသေနေရာတွင် ထားခြင်းဖြစ်၍ လိုအပ်သည့်အရာကို အချိန်ကုန်ခံ ရှာဖွေရခြင်းမရှိတော့ပေ။
သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်သည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ စုစည်းထားသည့် နေရာ
လုပ်ငန်းခွင်အား သန့်ရှင်းအောင်ထားခြင်း၊ ကိရိယာ တန်ဆာပလာနှင့် စက်ပစ္စည်းများကို ပုံမှန် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ စက်ကိရိယာများ ပျက်စီး၊ ချို့ယွင်းမှုမှ ကာကွယ်သည့်အပြင် သန့်ရှင်းသည့်လုပ်ငန်းခွင်ကြောင့် စိတ်ကြည်လင်မှုလည်း ရနိုင်သည်။ စံအဖြင့် ပေ (၅၀) အတွင်း လတ်တလောဖြစ်လာသည့် ပြဿနာ (စက်ပျက်၊ ပစ္စည်းပျက်မှုများ) ကို (၅) စက္ကန့်အတွင်း ရှာဖွေနိုင်သည်အထိ ရှင်းလင်း သပ်ရပ်နေရမည် ဖြစ်သည်။
အစီအစဉ်များ၊ အချိန်ဇယားများရေးကာ ပထမသုံးမျိုးအား ပုံမှန်လုပ်ဆောင်စေခြင်း ဖြစ်သည်။
အစီအစဉ်၊ အချိန်ဇယားတို့အား လိုအပ်သည့်များဖြည့်ကာ ညွှန်ကြားရန်မလိုအောင် ပုံမှန်လုပ်ဆောင်သည့်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိစေခြင်း ဖြစ်သည်။
↑ What Is 5S? - Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain။
↑ Gapp, R., Fisher, R., Kobayashi, K. 2008. Implementing 5S withinaJapanese Context: An Integrated Management System, Management Decision.
↑ Hirano, Hiroyuki. 1988. JIT Factory Revolution: A Pictorial Guide to Factory Design of the Future.
↑ Hirano, Hiroyuki (1995).5Pillars of the Visual Workplace. Cambridge, Massachusetts: Productivity Press. ISBN 978 1 56327 047 5
↑ Osada, Takashi (1995). The 5S's: Five Keys toaTotal Quality Environment. US: Asian Productivity Organization. ISBN 978928331 115 7
↑ Bicheno, John. New Lean Toolbox: Towards Fast, Flexible Flow. Buckingham: PICSIE.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အက်စ်_ငါးလုံး&oldid=518204" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၀၂:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။